ओली र प्रचण्डबीचको ‘वान टू वान’ वार्ता सकियो, केके गरे निर्णय ? - Dainik Nepal
ओली र प्रचण्डबीचको ‘वान टू वान’ वार्ता सकियो, केके गरे निर्णय ?
दैनिक नेपाल २०७४ फागुन १ गते १८:५३
काठमाडौँ, १ फागुन । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच मंगलबार पनि ‘वान टू वान’ वार्ता भएको छ । ललितपुरको मानभवनमा भएको दुई नेताबीचको वार्ता केही समयअघि सकिएको छ ।
वार्तामा पार्टी एकता र शक्ति बाँडफाँडमा अन्तिम सहमति जुटाउने बारे छलफल भएको स्रोतले बताएको छ । वार्तामा दुई नेताले बुधबार २ बजे पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाउने र बैठकमार्फत पार्टी एकताको टुंगो लगाउने निर्णय भएको स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि सोमबार पनि ओली र प्रचण्डबीच एकता र शक्ति बाँडफाँडको सम्बन्धमा ‘वान टू वान’ वार्ता भएको थियो । सोमबारको वार्तामा दुई नेताले पार्टी र सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक सहमति गरेका थिए । जसअनुसार आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने र आली र प्रचण्ड दुबै नयाँ पार्टीको सह–अध्यक्षको रुपमा रहेको सहमति भएको थियो ।